Peji - Rondedzera Izvozvi
Kutsigira Iwe Mukudzivirira Kusavimbika uye Mufambiro Usina Tsika muKushanda
Maitiro asina hunhu anodhura makambani pasi rese mabhiriyoni emadhora gore rega. Masangano ane yakazvimiririra hotline nzvimbo inocheka kubiridzira kurasikirwa muhafu.
TSIGIRAI MUMBA DZIDZISO & HWEMAHARA
BESPOKE & YAKASIYANA KASI YEMAHARA Management SYSTEM ETHICSPRO®
MAAWA 24 ZUVA, MAZUVA ANOMWE SVHIKI
CHAKAVANZIKA KUVHURIDZA HOTLINE
Report It Now ™ inoshongedza bhizinesi rako nemidziyo yekusimudzira nzvimbo yebasa isina kuvimbika uye kusazvibata.
Mhan'ara Izvo Zvino ™ inoshanda newe uye nebhizinesi rako kugadzira tsika yebasa yekutendeseka nekuvimbika. Kutsvagurudza kunoratidza kuve neyakavanzika uye yakavanzika kuridza muridzo nhare kana webhu-based system zvinobudirira kudzora njodzi kubva mukuita zvisina hunhu, sekubiridzira kana kudheerera.
Isu tinosanganisa hotline yedu yekuzivisa pamwe nedzidzo, rutsigiro uye ongororo yekuenderera mberi kuti ikubatsire kuzadzikisa hunhu hwevashandi vako, panguva imwe chete, tichivakurudzira kuti vataure chero kusazvibata nenzira isingazivikanwe, yakachengeteka uye yakavanzika.
yehunyengeri hwebasa hwaive kuonekwa nezano
yemasangano mari inofungidzirwa kuti inorasika nekuda kwekubiridzira gore rega
zvingangoita kuti vashandi vaunganidze matipi kana masangano achitevedzera kubiridzira kudzidzisa
EthicsPro® - Yakachengeteka, Isingazivikanwe, Nyore
Bhizinesi rako ndere itsva here kuEthicsPro®? Uri kuda kutsvaga rumwe ruzivo?
Kuti uwane mabhuku edu emirayiridzo, ndapota tinya pazasi.
Tsvaga ethicspro® zvinyorwa
Ongorora: Aya magwaro anotadzisa kupinda. Kana iwe usina chokwadi kana uriwe, uine password zvinetswa, kana uchifunga kuti unoda magwaro aya, ndapota taura nesu.
Mhan'arira It Iye zvino muridzo unoridzira muridzo wakapa vashandi vedu gadziriro yakachengeteka, yakazvimirira uko kwavanogona kuzivisa hunhu husina kunaka. Muindasitiri umo zviitiko zvekunyepedzera zvinogona kuitika, sevhisi yavo yakatiponesa zviuru zvemadhora mumakore apfuura.
- Mahotera Brands
Tinoda kuda kubatsira chero nenzira yatinogona. Tidonhedze meseji uye isu tinodzoka kwauri nekukurumidza sezvatinogona. Neimwe nzira, ndokumbira utifonere tichishandisa nhamba iripazasi.
Zvitaure Izvozvi ™ Ltd.
Tiri pano kuzokubatsira. Gadzira mushumo